Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Banky any Malawi ao Ulendo Airlink hanamafisana ny fizahan-tany eo an-toerana
Ulendo Airlink, kaompaniam-piaramanidina lafo vidy avy any Malawi, dia nampiditra tahan'ny sidina manokana ho an'ny Malawiana sy ny olona monina ao amin'ny firenena mba hampiroborobo ny fizahan-tany anatiny. Ity hetsika ity, raha ny filazan'ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka, dia antenaina hampiroborobo ny fizahan-tany ary hanome fotoana ahafahan'ny olona mitsidika toerana manintona mpizahatany.
Ny masoivohon'ny serivisy ara-barotra an'ny orinasa Azaria Manda dia nilaza fa ny olona iray dia tsy maintsy mampiseho porofom-pirenena amin'ny maha-olom-pirenena na honenana azy ireo hankafy ity fonosana ity. Olom-pirenena Malawi na saran-dalan'ny mponina, mitaky fanamarinana ny zom-pirenena na ny onenana no takiana amin'ny mpandeha rehetra.
Ulendo Airlink koa dia manana sidina mankany Blantyre, Lilongwe, Mzuzu, Club Makokola any Mangochi, Mfuwe any Zambia, Likoma Island, Liwonde ary Nyika National Park any Rumphi.
Nilaza ny talen'ny fizahan-tany ny lehiben'ny fizahantany Ian Mshani fa fampandrosoana tsara ity hampiroborobo ny fizahan-tany ao an-toerana.
Ny talen'ny fitantanana Travel Center Tsala Mapapa dia nidera an'i Ulendo Airlink tamin'ny fampahafantarana ny làlan'i Lilongwe-Blantyre sy ny fikendrena ny hikendry ireo Malawiana.